Ku xiridda London kula Amsterdam, Avignon, Brussels, yar, Lyon, Marseille, Paris, iyo Rotterdam, Eurostar malaha waa ka-xawaaraha sare ee ugu caansan adeegga tareenka ee Europe. Sidoo kale, Getlink si gooni gooni ah ka shaqeeya oo leh tareenada. Waxay Diidada Channel Tunnel ka dhexeeya boqortooyada Ingiriiska iyo France. Ordaya on shabakad of Xawaare sare khadadka, Eurostar Tababar count Class siddeed iyo toban-baabuur 373/1 tareenada iyo Class lix iyo toban-baabuur 374 tareenada. Waxay u ordaan ee ilaa 186 mph (300 kiiloomitir saacaddiiba). Intaas waxaa sii dheer, Eurostar xanbaarsan rakaab badan wixii ay dhammaan shirkadaha diyaaradaha ay weheliso. Arintani waxa ay Eurostar wadaha rail xukuma ee wadooyinka in ay u hawlgasho.
TGV caalamiga ah ee bari idiin qaadan doonaa in ay Frankfurt iyo Munich. Sidoo kale, aad safaradiisa koonfurta si toos ah aad u qaadan doonaa Milan ee Italy ama Barcelona ee Spain. Ha ka dhigin khalad safar, TGV waa mid ka mid ah tareenada xuduudaha iskaga gudba! Intaas waxaa sii dheer, waxay kugu qaadan doontaa safarkii ugu cajaa’ibka badnaa ee jaceyl Paris in xeebaha badda Mediterranean. Or, in Bordeaux u qurux badan, Lyon iyo Marseille oo Cannes caansan dunida ee ku. Sidaa darteed, haddii aad rabto si ay u gaaraan France iyo / ama Switzerland tareen, aad sameyn karto oo ay fuushan tareenada xuduudaha ay maamulaan TGV Lyria.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcross-border-trains-europe%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml waxaadna u badali kartaa / es / fr ama / de iyo luqado badan.
#renfe #traveleurope Xuduudaha deutschebahn Eurostar tgv tareenada